Uhlelo lwe-FDA Lokukala Izinsalela Zokubulala Ukhula Ekudleni Isinyathelo Sokuqala Nje - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Posted on February 17, 2016 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: Februwari 17, 2016
Ngemininingwane engaphezulu Xhumana: UGary Ruskin, 415-944-7350, gary@usrtk.org
Iqembu elimele abathengi i-US Right to Know lishayele ihlombe i-US Food and Drug Administration namuhla ngokumemezela lokho uhlela ukuqala ukuhlola izinsalela ze-glyphosate kubhontshisi, ummbila, ubisi namaqanda phakathi kokunye ukudla okungahle kube khona njengokukhathazeka ngentaba ethandwayo yokubulala ukhula emhlabeni jikelele. Yize i-FDA inesibopho sokuphepha kokudla kanye nokulinganisa njalo izinsalela zezibulala-zinambuzane ekudleni okuthile, i-ejensi ayizange ibheke njalo i-glyphosate ohlelweni lwayo lokulawula ukuqapha izinsalela zamakhemikhali esikhathini esedlule.
IGlyphosate iyisithako esiyinhloko kumbulali wokhula waseRoundup, owenziwe yiMonsanto Co, futhi futhi iyisithako esisebenzayo emakhulwini emikhiqizo ye-herbicide edayiswa emhlabeni jikelele. Ungumuthi wokubulala ukhula osetshenziswa kakhulu emhlabeni jikelele, futhi ukusetshenziswa kwawo kuye kwanda e-United States ngokusabalala kwezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo ezenzelwe ukubekezelela ukufuthwa nge-glyphosate. Kepha ukukhathazeka ngomthelela wamakhemikhali empilweni yomuntu nasemvelweni bekukhula, futhi ngoMashi 2015 ochwepheshe bomdlavuza beWorld Health Organisation bahlukanisa i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu.
"Ukuhamba kwe-FDA kuyisinyathelo sokuqala esihle, kodwa ukuhlolwa kufanele kwenziwe ngokuphelele futhi kusakazeke yonke indawo," kusho uGary Ruskin, umqondisi obambisene ne-US Right to Know. "I-USDA nayo kufanele igibele."
UMnyango Wezolimo wase-US wenza ukuhlolwa kwawo kwaminyaka yonke kokudla kwezinsalela zezibulala-zinambuzane “ngohlelo lwedatha yezibulala-zinambuzane,” oluvivinya kakhulu izibulala-zinambuzane ezingamakhulu amaningana unyaka ngamunye. Kepha kanye kuphela emlandweni wohlelo lweminyaka engama-24 lapho i-ejensi yenze izivivinyo ngezinsalela ze-glyphosate. Lezo zivivinyo, ngo-2011, zazilinganiselwe kumasampula kabhontshisi angama-300 futhi zathola ukuthi ama-271 amasampuli ayenezinsalela ze-glyphosate.
I-US Ilungelo Lokwazi iyinhlangano engenzi nzuzo ephenya ubungozi obuhambisana nohlelo lokudla lwenkampani, kanye nemikhuba kanye nomthelela wemboni yokudla kunqubomgomo yomphakathi. Sigqugquzela umgomo wemakethe yamahhala wokungafihli lutho - ezimakethe kanye nakwezepolitiki - njengokubaluleke kakhulu ekwakheni uhlelo lokudla olungcono, olunempilo.
Ukukhishwa Kwezindaba, izibulala-zinambuzane